News | Saturngod | Page 2
Leaveareply RethinkDB
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged Database, nosql on February 4, 2013 by saturngod. Link
is available on App Store now.
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 February 1, 2013
Leaveareply Fixed Myanmar font problem in iOS 6.1 Beta 5
9 Replies ဒီနေ့ ထွက်တဲ့ iOS 6.1 beta5မှာတော့ မြန်မာစာပါရင် iOS လေးသွားတဲ့ ပြဿနာကို ပြင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ UIWebView , UITableView နဲ့ စမ်းကြည့်တာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ email တွေမှာ မြန်မာစာ ပါရင် iOS6မှာလို လေးသွားတာ မရှိတော့ပါဘူး။ Facebook App မှာလည်း မြန်မာစာ ပါရင် ဖွင့်မရတာ မရှိတော့ပါဘူး။ iOS 6.1 beta5လို့ဆိုပေမယ့် code name က တော့ final ပါ။ iOS 6.1 ကို apple က မကြာခင်မှာ public လုပ်တော့မှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမ အပတ်မှာ iOS 6.1 ကို release လုပ်မယ်လို့တော့ မျှော်မှန်းထားတာပဲ။ iOS 6.1 ထွက်ပြီး update လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အခုလို မြန်မာစာ ပြဿနာတွေ မရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လေးထောင့် အတုံးလေးတွေပဲ မြင်ရနေအုံးမှာပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged iOS on January 27, 2013 by saturngod. Ornagai 2
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged app, ornagai on January 22, 2013 by saturngod. Tagu 1.2.6
4 Replies - fixed for unicode
- fixed for facebook
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged myanmar, tagu on January 20, 2013 by saturngod. Happy New Year
Leaveareply ၂၀၁၃ မှာ ကျွန်တော် Ornagai iOS version နဲ့ Ornagaime ကို Free ပေးလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
၃ နှစ် အတွင်း ဝယ်ယူပေးခဲ့တဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် iOS စရေးကာစက အားပေးကူညီခဲ့တဲ့သူတွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မသုံးပေမယ့် ဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ornagai က စပြီး iOS app တွေ ရေးခဲ့သလို android app တွေကိုလည်း ရေးတတ်လာခဲ့တယ်။
အခု Ornagai နဲ့ Ornagaime ကို iOS ပေါ်မှာ အမြဲ free ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားပေးခဲ့တဲ့ သူတွေ သာ မရှိခဲ့ရင် App store ပေါ်မှာ တစ်နှစ်ပဲ ရှိပြီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ တခြား App တွေကနေ ဝင်ငွေ ပြန်ရှာနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Apple App Store အတွက် ၁ နှစ် US $ 99 ကို ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Ornagai နဲ့ Ornagaime ကို Free ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
Ornagai ကို https://itunes.apple.com/us/app/ornagai/id376579933?mt=8 မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။
OrnagaiMe ကိုတော့ https://itunes.apple.com/us/app/ornagaime/id428747672?mt=8 မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာ Data တွေကို update လုပ်ထားတဲ့ version အသစ် ထုတ်ပေးပါမယ်ဗျာ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged iOS, ornagai on January 2, 2013 by saturngod. Ornagai Mac Dict Update
3 Replies Update with new data
download at https://github.com/downloads/saturngod/ornagai-V2/ornagaien.dictionary.zip
Unzip in ~/Library/Dictionaries/ or /Library/Dictionaries/
Check ornagaien in Dictionary.app > Preference > ornagaien
* Fixed CSS. So, no need to remove Myanmar Unicode Font on your Mac.
ornagai iOS app will update soon …..
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged mac, ornagai on November 7, 2012 by saturngod. Post navigation
စာဖတ်ဖို့မပျင်းပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းသည် သူများပြောပြလို့ သိခြင်းထက် အဖိုးတန်ပြီး ပို၍စွဲမြဲသည်။ — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod
Saturngod Proudly powered by WordPress Theme: Twenty Twelve. Proudly powered by WordPress